भैंसीको उत्पादन वृद्धिका लागि विज्ञहरुको सम्मेलन | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर भैंसीको उत्पादन वृद्धिका लागि विज्ञहरुको सम्मेलन
भैंसीको उत्पादन वृद्धिका लागि विज्ञहरुको सम्मेलन
नेपालमा खपत हुने ५७ प्रतिशत मासु भैंसीको
कात्तिक २९, चितवन (अस) । चितवनको सौराहामा बुधवारदेखि भैंसी विज्ञहरुको पहिलो अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन शुरु हुँदै छ । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको पशु विज्ञान, पशु चिकित्सा तथा मत्स्य विज्ञान संकायको आयोजनामा हुन लागेको सम्मेलनमा विभिन्न ११ देशका भैंसी विज्ञहरुको सहभागिता रहने छ ।
‘भैंसीको उत्पादनमा वृद्धि’ भन्ने मूल नाराका साथ नेपालमा नै पहिलो पटक चितवनमा हुन लागेको तीनदिने सम्मेलनमा भैंसीका विशेषज्ञ तथा अनुसन्धानकर्ता एवम् वैज्ञानिकहरूको सहभागिता रहने विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा.आईपी ढकालले जानकारी दिए । सम्मेलनमा नेपाल, भारत, चीन, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, थाइल्याण्ड, फिलिपिन्स, अमेरिका र क्यानडाका गरी झण्डै ५५ जना विदेशी विज्ञसहित २ सय जना प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहने छ ।
कार्यक्रममा ‘इन्टरनेशलन बफेलो फेडरेशन’का महासचिव प्राध्यापक डा. एन्टेनियो बर्गिस र पाकिस्तानको भेटेनरी विश्वविद्यालयका प्राध्यापक नासिम अहमदको विशेष प्रस्तुति रहने डा.ढकालले बताए । भैंसीको अनुवांशिक गुण वृद्धि गरी उत्पादन बढाउने र पोषण, स्वास्थ्य तथा भैंसीको व्यवस्थापनका विषयमा सम्मेलन केन्द्रित हुने छ ।
सम्मेलनमा भैंसीको बालीलाग्ने समय परिवर्तन र विकासका विषयमा समेत अनुभव आदानप्रदान गरिने आयोजकले बताएको छ । चितवनको रामपुरलाई पशुको अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने योजना रहेकाले सो विषयमा समेत छलफल हुने छ । सम्मेलनमा ९० ओटा अनुसन्धानात्मक कार्यपत्र प्रस्तुत हुँदै छन् । अमेरिकाको मिथिगन स्टेट युनिभर्सिटी, फ्लोरिडा युनिभर्सिटी तथा नेपालको पशुसेवा विभाग, नार्कलगायतका सङ्घसंस्थाको सहयोगमा सम्मेलन हुन लागेको हो ।
डा. ढकालका अनुसार नेपालमा ५२ लाख भैंसीहरु पालिएको छ । मासुको क्षेत्रमा भैंसीले ५७ प्रतिशत ओगटेको छ ।